Ciidamo gaar ah oo loo sameeyay inay sugaan amniga xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamo gaar ah oo loo sameeyay inay sugaan amniga xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho
Waxaa maalintii shalay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay ciidamo cusub oo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo la sheegay in loo sameeyay inay sugaan ammaanka xaruntaas.
Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo goobta lagu soo bandhigay ciidankaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadaan cusub ay yihiin kuwa si gaar ah ugu xil saaran xaqiijinta ammaanka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Wuxuu sidoo kale taliye Maxamed Sheekh Xasan tilmaamay in ciidamada ilaaliya xildhibaanada iyo kuwa gaarka ka haya xarunta golaha shacabka inay yihiin ciidan ka wada tirsan hal hurin oo ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliya.
“Gudoomiye Jawaari, ciidankaan aad arkaysid waa ciidanka ilaalin doonno xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, waxayna ka tirsan yihiin hal hurin, marka guddoomiye waxaan kaa doonaynaa inaad adigana naga warqabtid, oo aad na ilaawin” Sidaas waxaa yiri Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isna ka hadlay goobtii lagu soo bandhigay ciidamadaasi ayaa marka hore aad ugu mahad-celiyay Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Prof. Jawaari ayaa sheegay booliska inuu yahay ilaalinta muwaadinka, sidaasi awgeedna markasta loo baahan yahay ciidamada booliska inay ka turjumaan magaca Soomaaliyeed.
“Ilaalinta amaanka baarlamaanka waa saldhiga dowladnimada, ilaalinta dowladnimada waa soo saarista haybada shacbiga Soomaaliyeed uu mudan yahay, sidaasi awgeed mahad gaar ah ayaan u jeedinayaa Taliyaha iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo waayahaan dambe dib u habeyn xoogan wada.” Sidaas waxaa yiri gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamadan cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo sameeyay ayaa noqonaya kuwa mas’uuliyada amniga baarlamaanka qaata, maadaama xilligaan uu dalka ku jiro xilli kala guur ah islamarkaana ay halis tahay in amniga uu xumaado.